ColorOS 6 Beta ampahibemaso dia tonga amin'ny telefaona Oppo R15 | Androidsis
Roa herinandro lasa izay, Oppo dia nandefa ny Fanavaozana beta ho an'ny daholobe ColorOS 6 ho an'ny Oppo R15 Dream Mirror Edition. Ankehitriny, misy ny fanavaozana ho an'ny Oppo R15 mahazatra
ColorOS 6 mitondra interface vaovao miaraka Android 9 Pie mankany amin'ny Oppo R15. Ny interface interface vaovao dia mampiasa fotsy be dia be ary koa manandrana mampihena ny fampiasana ny lahatsoratra mba hamoronana interface tsy clustered. Nilaza i Oppo fa ny rafitra fiasa vaovao dia natao ho an'ny telefaona efijery feno (tontonana 18: 9 sy ambony).
Ny fanavaozana dia mitondra vaovao ihany koa Ny endri-tsoratra sinoa antsoina hoe OPPO Sans ary endri-tsoratra freeze an'ny fampiharana AI, izay mianatra izay fampiharana no ampiasaina matetika ary iza amin'ireo hampiato ny hanafoanana ireo loharanon-karena amin'ny rafitra. Raha vantany vao tsy nampiasaina mihoatra ny 20 minitra ny rindranasa dia efa ho fantatry ny rafitra, araka ny lamina fampiasa ampiasaina, raha toa ka fampiharana izay ampiasaina matetika hahalalana raha tokony hampangatsiaka na tsia.
Ahoana ny fametrahana ColorOS 6 amin'ny Oppo R15 Dream Mirror Edition
ColorOS 6 beta tonga tao amin'ny Oppo R15
Voalohany indrindra, tsy maintsy tadidinao izany ny orinasa dia mamoaka tsikelikely ny kinova fitsapana ny ColorOS 5. Midika izany fa mety mbola tsy manana izany ianao ary tsy afaka misintona sy mametraka azy. Na izany aza, ho azonao tsy ho ela izany: mety ho ora maromaro na andro. Ny tena izy dia hiparitaka eran'izao tontolo izao.
Raha hametraka ny fanavaozana dia mila mandeha mankany amin'ny menio fanavaozana lozisialy ao anaty fikiranao telefaona ianao. Eo ianao afaka manamarina raha tonga na tsia ary mametraka azy. Ho an'ity, Amporisihinay ny mahazatra: asio fiampangana tsara sy ampifandraisina amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ny fitaovana hialana amin'ny fanjifana data be loatra. Tsy mbola misy tatitra momba ny lanjany, fa toa be dia be. Noho izany dia zava-dehibe ny hitadidianao ireo hevitra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ahoana ny fametrahana ny ColorOS 6 beta amin'ny Oppo R15: tonga ny fanavaozana
Ny Nokia 9 dia haseho any Dubai amin'ny faran'ny volana